सरकारले कारबाही नगरे भ्रष्ट कर्मचारीलाई नेकपा विप्लवले यस्तो कारवाही गर्ने! – PathivaraOnline
Home > समाचार > सरकारले कारबाही नगरे भ्रष्ट कर्मचारीलाई नेकपा विप्लवले यस्तो कारवाही गर्ने!
admin September 6, 2020 September 6, 2020 समाचार	0
काठमाडौं- नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भ्रष्ट कर्मचारी र ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। विप्लव नेकपाले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपाले मल आपूर्ति गर्ने ठेक्का लिएर पूरा नगर्ने कम्पनी एवम् ठेकेदार, रेल विभागका महानिर्देशकलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।
विप्लव नेकपाले सरकारले त्यस्ता भैष्ट कर्मचारी र ठेकेदारलाई कारबाही नगरे जनातको माग बमोजिम आफूहरुले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशको उत्पादनलाई धरापमा पार्ने, किसानहरूको टाउकोमा गिर खेल्नेहरू अपराधी नै हुन् ।
त्यस्तै मल आपूर्ति गर्ने ठेक्का लिएर पूरा नगर्ने कम्पनी एवम् ठेकेदार र रेल मार्ग निर्माणका नाममा अर्बौं रकमको भ्रष्टाचारको खेल गर्ने रेल विभागका महानिर्देशक र ठेकेदार गिरोहलाई सरकारले तुरुन्तै कारबाही नगर्ने हो भने जनताको आक्रोश र कारबाहीको मागको नेतृत्व नेपाल कम्युननिस्ट पार्टीले गर्ने कुरासमेत सरकार र भ्रष्टाचारी जत्थालाई पार्टी स्पष्ट गर्दछ ।’
काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्लाष्टिक र धुलोमुक्त बनाउने मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको यस्तो छ नीति!